Dayax gacmeedka Meteosat: astaamaha, isticmaalkiisa iyo muhiimadiisa | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 06/05/2021 08:30 | Qalabka Saadaasha hawada
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira muhiimad sii kordheysa oo bulshada ah taas oo ay ugu wacan tahay aqoonta dhacdooyinka kala duwan iyo cawaaqibta ay leeyihiin dhibaatooyinka ifafaale dabiiciga ah. Waxaa lagu sharaxay iyadoo dan guud laga leeyahay arrimaha deegaanka. Waxaas oo dhami waxay ku dhammaanayaan in loo xagliyay iyada oo ay ugu wacan tahay faafinta ballaadhan ee macluumaadka saadaasha hawada iyada oo loo marayo wadiiqooyin kala duwan oo loo qaybiyo adduunka. Iyada oo dayax gacmeedka meteosat Sawirrada waxaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo dareemayaal lagu rakibo faahfaahin aad u fara badan oo naga siin kara macluumaad badan oo ku saabsan dhacdooyinka saadaasha hawada ee ku dhaca jawiga waqtiga dhabta ah.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkan si aan kuugu sheegno waxa ay yihiin astaamaha iyo muhiimadda dayax-gacmeedka meteosat.
1 Horumarka saadaasha hawada
2 Faa'iidooyinka dayax gacmeedka meteosat
3 Astaamaha dayax gacmeedka Meteosat
Horumarka saadaasha hawada
Isbedelka caalamiga ah dartiis waxaa jira isbeddel sii kordhaya iyo baahi loo qabo in si wanaagsan loo fahmo astaamaha saadaasha hawada ee jawiga. Sawirada laga helay dareemayaasha lagu rakibay meheradaha iyo satalaytka meteosat ayaa loo isticmaalaa in lagu fuliyo falalka arrinta ka hortagga, feejignaanta, yareynta musiibada iyo soo kabashada aagagga ay dhibaatadu saameysey by ifafaalo dabiici ah oo kala duwan Waxaan ognahay in isbedelka cimilada dhacdooyinka cimilada ugu daran ay sii kordhayaan soo noqnoqoshada iyo xoojinta labadaba. Tani waxay ka dhigaysaa dareemidda fog qalab muhiim u ah falanqaynta iyo qiimeynta khataraha dabiiciga ah.
Dayax-gacmeedka meteosat wuxuu caawiyaa inuu yeesho sawirro badan oo heer caalami ah ku dhowaad waqtiga dhabta ah ee gacan ka geysta sidii loo aqbali lahaa cawaaqibka suurtagalka ah ee dhici kara iyadoo ay ugu wacan tahay xaalad dabiici ah. Tusaale ahaan, qaraxii fulkaanaha Icelandic Eyjafjallajokull wuxuu kala qaybiyey dhammaan taraafikada hawada inta badan woqooyiga Yurub wuxuuna ku qasbay joojinta duulimaadyada adduunka intiisa badan. Tani waa laga hortagey iyada oo ay ugu wacan tahay ka qayb qaadashada dareenka fog iyadoo la adeegsanayo dayax gacmeedka meteosat. Kiis kale ayaa ah in ay matalaysay horumar la taaban karo oo looga hortagey dadka in ay soo dhowaadaan soo dhaweynta cyclogenesis iyo in ay gacan ka geysteen ilaalinta hantida maadiga ah iyo yareynta qasaaraha aadanaha.
Thanks to dayax gacmeedka meteosat, nidaamyo digniino hore oo kala duwan ayaa la sameeyay si looga digo isbadalka iyo muuqaalka dabka kaynta. Sidan oo kale, qorshooyinka maamulka ayaa loo samayn karaa si loo joojiyo dabka loona yareeyo waxyeelada si wanaagsan looga ilaaliyo deegaanka. Suurtagalnimada in la sameeyo qorshayaashan dabka waxaa soo saaray mahadnaqa dareemayaasha cusub ee u oggolaanaya qabashada heerkulka ka baxa dhulka dushiisa.
Faa'iidooyinka dayax gacmeedka meteosat
Dayax gacmeedka meteosat waxaan haynaa nidaam soo dhaweyn macluumaad marka ay timaado wax ka qabashada daraasadaha kaladuwan ee deegaanka ee lagu dabaqay falanqaynta dhacdooyinka laxiriira ifafaalaha dabiiciga ah sida xasilooni darrada jawiga, qiiqa fulkaanaha ee hawada, dababka waaweyn ee dabka, iwm Waa inaan fahamnaa in dayax gacmeedka meteosat uu leeyahay codsiyo waaweyn oo looga hortago saadaasha hawada.
Si loo isticmaalo, habab kala duwan oo gaar ah ayaa la raacayaa waxaana la helayaa natiijooyin u adeega dhammaystirka go'aan ka gaarista maamulada aqoonta u leh arrimaha deegaanka. Muhiimaddiisu waa mid aad u weyn oo waxay bixisaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah inay awood u yeelato inay diyaariso saadaasha saadaasha saadaasha saadaasha, si ku habboon yareynta saameynta suurtagalka ah ee xaaladan cimilada ee dhulka. Tan waxaa lagu garan karaa mahadsanid dareenka fog ee duufaannada waaweyn iyo horumarkooda joogtada ah.
Waxaan sidoo kale qiimeyn karnaa kalgacalka qulqulka dambaska fulkaanaha oo noqon kara dib u dhac weyn oo caalami ah oo sababi kara khasaaro dhaqaale oo aan la soo koobi karin. Tusaale ahaan, haddii aan ogaan karno faafidda dambaska fulkaanaha, waan qorsheyn karnaa hagaajinta gaadiidka cirka iyo dhulka lana adeegsado hanaan caadi ah si loo ilaaliyo horumarka daruuraha foolkaanaha. Waxaan sidoo kale yareyn karnaa ama ka hortagi karnaa wasakheynta deegaanka sababo laxiriira walxaha baaruudda dioxide ee kusii jira ganaax kadib fulkaanaha.
Ujeeddada kale ee dayax gacmeedka meteosat waa in la helo falanqeyn tiro ah oo ku saabsan saameynta dabka kaynta laga bilaabo xilliga ay soo ifbaxaan ilaa ay baaba'aan. Thanks to dayax gacmeedkan, waxaa suurtagal ah in la qiimeeyo waxa waxyeelada iyo kharashka dayactirka uu ahaa. Saynisyahannadu waxay damacsan yihiin inay soosaaraan sawir gacmeedyo halis ah oo isu keenaya tiro badan oo doorsoomayaal ah oo sharxi kara dhacdooyinka kala duwan ee saadaasha hawada ee la darsay ayna doorbidaan saadaasha, maareynta iyo howlaha qorsheynta ee la xiriira nooc kasta oo dhacdo ah. Sida aad u jeeddo, Aad ayey faa'iido u leedahay in la ogaado waxa ka dhacaya meeraheenna oo aragti guud laga yeelan karo.
Horumarka waara ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya qorshaynta dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay bar furan ee faafinta macluumaadka juqraafiyeed oo ay taageerayaan barnaamijyo kala duwan oo bilaash ah oo furan.
Astaamaha dayax gacmeedka Meteosat
Waa dayax gacmeedyo taxane ah oo ay maamusho EUMETSAT. Waxaa jira meel bannaan oo ku taal isgoyska meeriska Greenwich Ecuador waxay tagtaa joog dhan 35800 kilomitir. Meesha ay ku taalo satelite-ka awgood, waxay yeelan kartaa wareejin leh xawaare tarjumaad ah oo ku beegan tan wareega Dunida. Sidan oo kale, waxaan markasta arki karnaa isla qaybta meeraha. Waa aag u dhigma wareega oo xuddun u ah Gacanka Guinea oo daboolaya ilaa 65 digrii oo latitude ah. Jasiiradda Iberia waxaa laga helaa aaggan oo dhan waxaana loo dooran karaa in lagu barto dhinacyo kala duwan oo saadaasha hawada ah oo aan daneyn karno.
Hadda waxaan baran doonnaa qaabka uu u shaqeynayo dayax-gacmeedkani. Waxay isticmaashaa sawirrada VIS, IR iyo VA nus saac kasta. Waxay awood u leedahay inay hesho sawirada nus saac kasta si aan uheli karno xalin wanaagsan oo waqti kumeel gaar ah si aan ula socono dhacdooyinka saadaasha hawada ee kaladuwan sida qeybinta iyo kala duwanaanta daruuraha. Waan ognahay in daruurtu ay tahay mid ka mid ah dhinacyada ugu waaweyn ee lagu ogaanayo isbedelka duufaanka, tusaale ahaan. Dhowr sawir ayaa laga heli karaa nus saac kasta saacadaha kala duwan ee elektromagnetic: Visible (VIS), Thermal Infrared (IR) iyo Water Vapor Infrared (VA) oo u dhiganta saddexda nooc ee dareemayaasha ee dayax gacmeedku ku qaado markabka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dayax gacmeedka meteosat iyo astaamaha lagu garto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Meteosat Satellite